Lollipop စာရွက် (အိမ်လုပ်) + ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - သကြားလုံး
စိတ်ကြိုက် Lollipop ကိတ်မုန့်များပြုလုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး Lollipop စာရွက်
ဒီ Lollipop စာရွက်ကိုပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီအရောင်များ၊ အရသာများနှင့်အလှဆင်မှုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါဒီကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေခြင်းနှင့်အလုပ်တွေအများကြီးယူမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Lollipop စာရွက်အောင်ကိုချစ်။ သူတို့အားခေတ်မှီ Lollipop ကိတ်မုန့်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
1/2 Tsp သကြားလုံးအရသာ
ဤရိုးရှင်းသောအိမ်လုပ် Lollipop စာရွက်တွင်ပါဝင်သောအရာများသည်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ မည်သူမဆိုသူတို့ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်မုန့်ဖုတ်သည့်ပမာဏမည်မျှပြုလုပ်ပါကသင်၏အိမ်တွင်ဤပါဝင်ပစ္စည်းများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှ granul သကြား (အမှုန့်မပါ), ပြောင်းဖူးရည်, ရေစက် (သို့မဟုတ်ပုလင်း) ရေ, သကြားလုံးအရသာ ဆန္ဒရှိလျှင်နှင့်အစားအစာအရောင်။ ငါအလှဆင်ဘို့ငါ့ Lollipops အချို့ဖြန်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။
သကြားလုံးအရသာသည်ထိုတွင်ထူးဆန်းသောပါဝင်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်သော်လည်းလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်သည်။ သကြားလုံးအရသာကို Michaels (သို့) Jo-Anns စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံကိတ်မုန့်အလှဆင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များတွင်ရနိုင်သည်။ သကြားလုံးအရသာအထူးသဖြင့်အရသာမဆုံးရှုံးစေဘဲအပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ သကြားလုံးအရသာရှိသည့်နေရာတွင်ဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူမှုများကိုသင်မသုံးနိုင်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်သည်။
သကြားကိုချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပစ္စည်းအချို့လိုအပ်သည်။ ငါသည်ဤ Lollipop စာရွက်အဘို့အဆို Lollipop မှိုမသုံးကြဘူးဒါပေမယ့်သင်တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံသဏ္orာန်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်ကျိန်းသေမှိုကိုသုံးနိုင်သည်။ သကြားလုံးအမာများပြုလုပ်သောမှိုများကိုသင်သေချာစွာသုံးပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသကြားပူမှအရည်ပျော်သွားနိုင်သည်။
အိမ်လုပ် Lollipop တွေဘယ်လိုလုပ်သလဲ
Lollipop စာရွက်ကိုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏သကြား၊ ပြောင်းဖူးရည်နှင့်ရေကိုပေါင်းစပ်။ ဆူပွက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ တည်ငြိမ်မျှတည်ထားပါမှအလယ်အလတ်အပူလျှော့ချ။ မွှေရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အရောအနှောကို ၅ မိနစ်မျှဖုံးအုပ်ထားပါ။ ၎င်းသည်အဖုံးပေါ်တွင်ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ဒယ်အိုး၏ဘေးနှစ်ဖက်ကိုယိုယွင်းကျဆင်းသွားစေပြီးအရည်ပျော်မှုမရှိလျှင် crystallization ဖြစ်စေနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့်သကြားဓာတ်ပုံသဏ္downာန်များကိုဆေးကြောရန်အတွက်ဟင်းချို၏နှစ်ဖက်လုံးကိုသန့်စင်ရန်သန့်ရှင်းသော pastry brush နှင့်ရေချိုကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာအသစ်သော pastry ဖြီးရဲ့သေချာပါစေနှင့်သင်၏သကြားလုံးကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါဖြီးအတွက်မဆိုအမဲဆီသို့မဟုတ်အစားအစာအပျက်အစီးများမရှိပါ။
အရောအနှောပျောက်သွားပြီးတာနဲ့သင်၏သကြားလုံးသာမိုမီတာကိုထည့်ပြီးအဖုံးကိုဖယ်ပါ။ ဤအရာသည်အရောအနှောမှရေကိုအငွေ့ပြန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရမည့်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကမိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ သင်၏အပူချိန်သည် ၂၂၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ရာရေငွေ့အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိသတိပြုမိလိမ့်မည်။ အားလုံးအရောအနှောနှိုးဆော်မထားပါနဲ့။
သင်၏သကြားလုံးအပူမီတာကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပါ၊ ရေနွေးငွေ့အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်၏ရေကုန်သွားသည်နှင့်အပူချိန်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာပြီးသင်မပူစေလိုပါ။ သင်၏အရောအနှောကို300ºFမရောက်မှီတိုင်အောင်ပူပေါင်းပါစေ Hard အက်ကွဲဇာတ်စင် ။
သငျသညျ Hard အက်ကွဲအဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အပူထဲကနေအရောအနှောကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရသာနှင့်အရောင်များကိုယခုရောစပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏သကြားလုံးများကိုသင်၏မှိုထဲသို့ပြုလုပ်ရန်သင်၏မှိုသို့သို့မဟုတ်သင်၏ဆီလီကွန်ဖျာထဲသို့လောင်းနိုင်သည်။
သင်၏အိမ်လုပ် Lollipops များပြုလုပ်ရန်၊ သင်၏အရောအနှောအနည်းငယ်အေးသွားစေရန်အနည်းငယ်အအေးခံရန်စောင့်ပါ။ သငျသညျ 300 ontoF သကြားကိုသင့်ရဲ့ဖျာပေါ်သို့သွန်းလောင်းလျှင်သူကနေရာတစ်လျှောက်လုံးကို run သွားမယ့်။
မင်းရဲ့သကြားလုံးကိုသေးငယ်တဲ့အထဲထည့်လို့ရတယ် silicone တိုင်းတာခြင်းခွက်ကို သင်၏ Lollipop ၏ပုံသဏ္overာန်ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Lollipop template ကိုသင်လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ် print ထုတ်နိုင်သည် lollipop template ကို အဆိုပါဆီလီကွန်အောက်မှာနေရာ။ သကြားဓာတ်လောင်ကျွမ်းမှုမှကာကွယ်ရန်သင် silicone လက်အိတ်အချို့ကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ထားပါ။
သကြားသဏ္sugarာန်သည်ပုံသဏ္keepingာန်မပျက်ရှိအောင်သေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင်စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်အဆင့်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါသို့မဟုတ်သင်မှိုမရှိဘဲ Lollipops ပတ်ပတ်လည်လာရန်ခဲယဉ်းအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ဆီလီကွန်ဖျာကိုတင်းပလိတ်ပေါ်တွင် တင်၍ စက်ဝိုင်းထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်အထိသကြားကိုသွန်းလောင်းပါ။ သင်၏ lollipop တချောင်းကိုသကြားအပူ၏ ၁/၃ အောက်၌ ထား၍ တုတ်လုံးကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။ ထို့နောက်လှံတံသည်လုံးဝဖုံးအုပ်ထားပါ (ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ) ။
သင်သည်ဖျန်းဖြည့်ထည့်လျှင်သင်အနည်းငယ်ထိပ်ကိုတင်နိုင်သည်။ ရွှေရွက် lollipops အတွက်ငါလောင်းပြီးတာနဲ့လက်ကို Lollipop ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏သုတ်လိမ်းထားသော lollipops များကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သကြားလုံးကိုအဖြူရောင်အရောင်ဖြူတစ်စက်နှင့်အခြားနည်းနည်းဖြင့်အမည်းရောင်အရောင်တစ်စက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သကြားလုံးကိုအရောင်တင်ခဲ့သည်။ အတူတူ swirl နှင့်လောင်း။ သင် lollipops တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ချင်ရင်အစားအသောက်အရောင်ကိုသာထည့်ပါ။ သငျသညျသူတို့ကိုမဖြစ်နိုင်ချင်လျှင်, သင်၏အရောင်နှင့်အတူအဖြူရောင်အစားအစာအရောင်တစ်စက်ထည့်ပါ။
silicone ဖျာမှမဖယ်ရှားခင်သင်၏ lollipops များကို ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်အေးအောင်ထားပါ။
အိမ်လုပ် Lollipop တွေဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
Lollipops များသည်သကြားနှင့်သကြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်သဘာဝသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရက်ကိုအမှန်တကယ်မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ သငျသညျနှစ်အရွယ်ဟယ်လိုဝင်းသကြားလုံးကိုစားဖူးဘူးငါ့ကိုပြောပြမထားပါနဲ့။ ငါရှိတယ်သိတယ်
ငါအနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုပြုပြီးဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ Lollipops များကိုအခန်းအပူချိန်တွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ထားခဲ့၏။ ဖေဖော်ဝါရီလဖြစ်လို့ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးရတယ်။ နှင်း၊ နေ၊ မိုး၊ မိုး၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်စေးကပ်လာသည်။ ငါသူတို့ကိုဖုံးအုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာစကပ်ကပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လေကသူတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်မလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်စိုစွတ်သောinရိယာတွင်ရှိနေပါက၎င်းတို့ကိုစိုစွတ်သောရှုပ်ထွေးမှုအဖြစ်သို့မရောက်စေရန် lollipops များကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီဆဲလ်ဖိန်းဖြင့်ပတ်ထားခြင်းကိုကာကွယ်သင့်သည်။
ကျန်ရှိသော Lollipop သကြားကိုဆီလီကွန်ဖျာတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီးအအေးခံနိုင်သည်။ စတိုးဆိုင်ကိုပလတ်စတစ် ziplock အိတ်ထဲကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပါ။ သငျသညျအခြို့သကြားလုံးသကြားလုံးလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင်ကအရည်ပျော်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို300ºFအထိပြန်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ အပူခံနိုင်သောကွန်တိန်နာအတွင်းရှိမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်အရည်ပျော်သွားသည်။
ပြောင်းဖူးရည်မပါဘဲဒီ Lollipop စာရွက်ကိုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဤ Lollipop စာရွက်တွင်ပြောင်းဖူးရည်သည် crystallization ကိုကာကွယ်နိုင်သောကြောင့်ပြောင်းဖူးရည်ပါ ၀ င်သည်။ ကမ္ဘာ့နေရာအချို့တွင်ပြောင်းဖူးရည်ရရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ၊ ပြောင်းဖူးရည်မသုံးဘဲအိမ်လုပ် Lollipops များပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရိုးရှင်းစွာအဒီချက်နည်းမှပြောင်းဖူးရည်မှထွက်ခွာပေမယ့်သကြား crystals ကြီးထွားလာကာကွယ်တားဆီးဖို့သင့်ရဲ့ဒယ်အိုး၏နှစ်ဖက်ကိုဆေးကြောရန်အလွန်သတိထားပါ။ သင့်ရဲ့သကြား crystallize ပါဘူးဆိုရင်, ကသိမ်းဆည်းဖို့နည်းလမ်းမရှိ။
Instagram ပေါ်ရှိ Lollipop ကိတ်မုန့်အချို့ကိုသင်မကြာသေးမီကတွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Lollipop စာရွက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသော Lollipops အမျိုးအစားသုံးခုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ရွှေအရွက်နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်ရွှေ dragees နှင့်စကျင်ကျောက်ဖြူများဖြင့်ရှင်းလင်းထားသည်။ ငါသုံးမျိုးစီလုပ်။ ငါ့ကိတ်မုန့်ထိပ်ပေါ်မှာသူတို့ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
ငါ့အလှဆင်တယ် စကျင်ကျောက် fondant ကိတ်မုန့် Lollipops တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရွှေရောင်အရွက်တစ်မျိုးနဲ့ထွက်လာတာကိုသဘောကျတယ်။ သော့က Lollipops တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးအရောအနှောရောညီအောင်လုပ်ဖို့ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Lollipop ကိတ်မုန့်ပြုလုပ်နည်းကိုလေ့လာလိုပါသလား။ ငါလှပသောရွှေနှင့်စကျင်ကျောက် Lollipops အချို့ကိုမည်သို့ဖန်တီးခဲ့ပုံကိုဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှု။ ခေတ်မီသော Lollipop ကိတ်မုန့်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်၏စကျင်ကျောက်ကိတ်ကိုအလှဆင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သကြားမပါသော Lollipop ရွေးစရာကိုအသုံးပြုပါ isomalt အရည်ပျော်ရန်အဆင်သင့် Simi-Cakes ။
အိမ်လုပ် Lollipops တွေဟာပျော်စရာကောင်းပြီးလုပ်ရလွယ်တယ်။ အရသာနှင့်အရောင်များကိုအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်လုပ်အားရစရာ! ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် အအေး:ဆယ့်ငါး မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၃၅ မိနစ် ကယ်လိုရီ159kcal
▢၈ oz သကြားဓာတ်
▢၅ oz ပြောင်းဖူးရည်
▢နှစ် oz ရေစက်ရေ (သို့မဟုတ်ပုလင်းများ)
▢1/2 Tsp သကြားလုံးအရသာ
▢ အစားအစာအရောင် (optional ကို)
အလယ်အလတ်မြင့်အပူထက်သကြား၊ ပြောင်းဖူးရည်နှင့်ရေကိုလေးလံသောအောက်ခြေသံမဏိအိုးများ၌ပေါင်းစပ်ပါ။ ဆူအောင်တည်ဆောင်ခဲ့ရမည်
အရောအနှောကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကို ၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်တည်ဆောက်ပါ။ အဖုံးကိုဖယ်ရှားပြီးအလယ်အလတ်မှအပူကိုလျှော့ချပါ။
သကြားလုံးသာမိုမီတာကိုထည့်ပြီး ၃၀၀ ºFအထိမွှေပေးပါ။
အရောအနှောသွန်းလောင်းသည့်အခါပုံသဏ္holdာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်လုံလောက်သောအထူမဖြစ်မချင်းသင်၏ဆီလီကွန်ဖျာပေါ်တွင် (သို့မဟုတ်သင်၏သကြားလုံးမှိုသို့) စက်ဝိုင်းများသွန်းလောင်းသည်အထိအနည်းငယ်အေးအောင်ထားပါ။ သင်၏ lollipop တုတ်များကိုထည့်ပြီးဖျာမှမဖယ်ရှားမီအအေးခံပါ။
၎င်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန် lollipops ၏နောက်ဘက် (optional) ကို torch ။ အခန်းအပူချိန်တွင်လေလုံသောကွန်တိန်နာများတွင်သိုလှောင်ပါသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုစေးကပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်တစ် ဦး ချင်းစီခြုံပါ။
ခြစ်ရာကနေ vanilla ထောပတ်ကိတ်မုန့်စာရွက်
ခြစ်ရာကနေ vanilla ကိတ်မုန့်အဘို့အစာရွက်